Gbasara Anyị - TMTeck Instrument Co., Ltd.
TMTeck Instrument Co., Ltd. (nke a: TMTeck) bụ onye ndu ndị na - emepụta NDT na ndị na - eweta ngwaahịa na Beijing China ma na-enye teknụzụ ọhụụ na etu esi amata ndị ahịa n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa. Ruo ugbu a, TMTeck nọ n'ọrụ na mpaghara nyocha nyocha nke teknụzụ nke na-ewepụta arụpụta ọrụ, ogo na nchekwa.
Amalitere site na ndị na-agbanwe Ultrasonic na mkpuchi ọkpụrụkpụ nlele, ugbu a TMTeck ewepụtala ihe karịrị usoro 10 nke ngwa nyocha, gụnyere Ultrasonic Flaw Detector, Coating Thickness Gauge, Harders Testers, Ultrasonic Thickness Gauge, ngwa ha na ihe ndị ọzọ NDT. A na-eji ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ ebe na nyocha nke ihe ndị na-enyere ndị ahịa anyị aka inyocha, ijikwa ma gosipụta usoro na ngwa ha dị oke mkpa, ngwaahịa anyị nwekwara asambodo CE.
TMTeck kwadoro itinye aka na mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị ogologo oge site na ịnye ọrụ na-enweghị atụ, ndụmọdụ teknụzụ na enyemaka. Anyị na-emepụta ma mepụta ọtụtụ ngwa ọrụ NDT na arụmọrụ dị elu. Site n'ịnọgide na-elekwasị anya na ndị ahịa na-elekwasị anya na asọmpi ụwa, TMTeck abụwo otu n'ime ọkwa kachasị elu nke ụlọ ọrụ klaasị ụwa mgbe ọ na-eduga na ngwa NDT. Na anyị na-emepe emepe ọhụrụ usoro ngwaahịa dị ka ahịa ina. Anyị nwere ike ịnye ezigbo nkwa maka ndị ahịa anyị.
Mmadu Emebiri Ihe
Ọ bụrụ na ngwaahịa a emetọla mmegbu, ihe ọghọm, mgbanwe, mgbanwe, mmebi iwu, enweghị ike, iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi, ma ọ bụ onye edozighi ma ọ bụ rụkwaa ọrụ ọ bụla na-enweghị ikike inye ụdị ọrụ a, ma ọ bụ enweghị kaadị nchekwa ahụ, ụlọ ọrụ anyị agaghị adị maka mmezi.
Ọ bụrụ na achọrịrị ngwaahịa a n'ime oge nkwa (ewezuga ngwa anaghị arụzi), biko zighaa ngwaahịa maka mmezi site na iji kaadị nchekwa. Ọ bụrụ na ụbọchị mmebi ngwaahịa gafere, ụlọ ọrụ anyị ga-akwụ ụgwọ maka nrụzi.
Enwere ike idozi ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị n'efu n'ime afọ abụọ. Nweputa mmeputa ihe ndi ozo.
Ntị nke Ndị Ọrụ
Onye oru kwesiri ijuputa kaadi a ma zighachi ulo oru ndi zuru ahia a, yabụ, a gaghi emezi ngwaahịa a n'efu.
TMTeck Manufacturing Limited hiwere, ụdị ngwaahịa mbụ anyị malitere nke ọma- usoro nke mkpuchi ọkpụrụkpụ nlele
usoro nke ultrasonic flaw detector pụta, na-ekpori ndụ dị elu na mba Europe na mba America.
usoro Leeb ekweghị ekwe Tester abịa ahịa ọma, ahịa reated ike ..
anyị Beijing ụlọ ọrụ TMTeck Instrument Co., Ltd e tọrọ ntọala ..
flagship ngwaahịa -Ultráys ọkpụrụkpụ nlele nke ọma mepụtara, na-akwalite arụmọrụ karịrị otu nde.
mepụtara teknụzụ nke ọma iji mepụta ụdị nyocha ultrasonic niile nwere ike izute mkpa GE, OLYMPUS na ngwa ndị ọzọ nke mba ọdịda anyanwụ.
anyị factory Kpọrọ ọhụrụ ulo oru ebe, factory omumuihe bụ 300m², Ukwuu ụba mmepụta ikike.
ụdị ihe mmetụta ọhụụ dị na mpụga Roughness Tester TMR360 banyere ahịa ahụ nke ọma ma nwee nnukwu aha na ụlọ ọrụ a.
iji gboo mkpa nke ndị ahịa North America, anyị mepụtara ụzọ abụọ nwere ike ịwepu kristal DA na nyocha ndị ọzọ mejupụtara kristal, bụ ndị nwere nnukwu uche karịa GE.
anyị na-etinye aka na nyocha na mmepe nke ndị na-achọpụta ihe na-adịghị mma nke na-eme ugbu a, na n'oge na-adịghị anya, ha ga-ewepụta ụlọ ọrụ na-eduga ndị na-achọpụta ihe ọhụụ dị ugbu a nke na-agbaso ụkpụrụ EU EN1711-2000 na ụkpụrụ mba GB / T26954-2011.
TMTeck kwadoro itinye aka na mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị ogologo oge site na ịnye ọrụ na-enweghị atụ, ndụmọdụ teknụzụ na enyemaka.
Mgbanwe Nnwale Ule, Mmezi Nkanka, Mkpọchi Pipe, Ultrasonic Transducer Gịnị, Ule ule, Ultrasonic mmezi Block,